The Best Awezamapaki okuzithokozisa EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > The Best Awezamapaki okuzithokozisa EYurophu
Uma ungenaso isiqiniseko zazo amapaki ezokuzijabulisa eYurophu kukhona okungcono, ke ubhekisise. Lesi sihloko uhlu ezinye zezindawo ezingcono kakhulu amapaki ezokuzijabulisa ungavakashela eYurophu manje! Sizokunikeza izincazelo ngamunye nendlela ungathola kubo ngesitimela. Ngakho asiqale ohlwini!
I Largest Ipaki yokuzijabulisa e-Europe - Disneyland Paris
Uma ungazange wavakashela, uke ngokungangabazeki wezwa Disneyland Paris. Lesi siqiwu kuhlanganisa yonke into umuntu angathola kule Disneyland yokuqala e-United States. plus, sifaka indaba ephathwayo amapaki ezimbili kanti ingqikithi amahhotela ayisikhombisa ku-site! Wena uyobe cishe kudingeka izinsuku ezimbalwa uma ufuna ukuvakashela konke. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi uvakashele Walt Disney Studios kulungile eduze kwepaki.
Uma kuziwa ekufinyeleleni kwepaki, kungcono lula ukufika lapho ngesitimela. Omunye emaphakathi isitimela Izikhumulo kakhulu IFrance eduze Disneyland. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo esikhuluma ngako Marne-la-Vallee / Chessy sesitimela, futhi ungakwazi ukufinyelela kalula kusuka kuphi France noma ngaphezu. Yini enye, Disneyland itholakala hhayi ikude kakhulu kusukela Paris.
Lyon ukuba Disneyland Marne-la-Vallee Izitimela
I-Edume kakhulu Ipaki yokuzijabulisa e-Germany - Europapark
Europapark kuyinto kwepaki kunawo futhi ethandwa kakhulu kulo lonke elaseYurophu, ngakwesokudla ngemva Disneyland. Nokho, ukuthi akusiwona kungani sikhetha ke. Kuyinto omunye the best amapaki ezokuzijabulisa eYurophu ngokombono wethu ngenxa roller-coasters. Uzothola ukugibela eziningi zazo nokuningi okuhlukile ngempela. Uzoba ukuhlola Arthur – entsha roller-coaster lokho inhlanganisela i / eyodwa zasendlini ongaphandle nge ride amnyama kanye!
Ungakuthola lokhu ipaki yetimu emangalisayo eRust, close edolobheni ukuze Freiburg futhi Strasbourg. Lokho kusho ukuthi ungakwazi ukufinyelela Europapark sasivumela kalula ngesitimela, kusukela kunoma iyiphi idolobha. I esiteshini sesitimela ezinye 4km kude ukuze ukwazi ke ukuhamba emnyango, noma uthathe omunye njalo amabhasi ukuthi ukuya epaki.
Strasbourg ukuze Ringsheim Izitimela
Stuttgart ukuze Ringsheim Izitimela
Basel ukuze Ringsheim Izitimela
Offenburg ukuze Ringsheim Izitimela
I Fairytale Capital of Europe - Efteling Ipaki yokuzijabulisa
Abantu abaningi kuzo zonke eYurophu Angazi ngalokhu Dreamland kubo bonke abathandi Fairytale! Nokho, kwepaki nguye enkulu kuwo wonke amazwe amathathu aseBenelux. Yini enye, efteling indawo lapho wonke inganekwane owaziwa yaqhuma! Eziningi zalezi Fairytales zakudala Hans Christian Andersen, Charles Perrault, kanye Brothers Grimm yaqhuma lapha. Basuke efakiwe ngokusebenzisa okunezinhlobonhlobo eziningi ugibele, ezamehlela, futhi nokuningi. Sekukonke, uzodinga okungenani izinsuku ezimbili ukuvakashela konke!
Ungavakashela Efteling sasivumela kalula nge isitimela. It itholakala khona phakathi kwawo wonke emadolobheni amakhulu e-Netherlands. Lokho kwenza kwepaki kufinyeleleke abavela kulo lonke elase Netherlands nangale. Nge ilungelo isitimela ukuxhumana, ungakwazi ukufinyelela epaki kusuka kuphi eYurophu. Yilokho esinye isizathu esenza Efteling liphakathi engcono amapaki ezokuzijabulisa eYurophu!
Sekukonke, laba abathathu bamunye ngamapiki zethu phezulu. Kukhona nabanye abaningi eYurophu, lokho ezithile, kepha sinomuzwa wokuthi yibo abathathu kuphela abangempela. Ungakwazi Xhumana nathi uma ufuna ukwazi kabanzi mayelana amapaki kanye ugibele isitimela kubo. Futhi, ukhululeke sibheke ibhulogi yethu. Thina ngokuvamile bebhala ezindaweni eziningi futhi isitimela ugibele kuwufanele ngokuvakashela nokuthatha yonke eYurophu!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-amusement-parks-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / fr noma / pl kanye ngezilimi ezingaphezu.
#UkuzijabulisaPark #efteling #PortAventura #traveleurope i-eurotrip amathiphu isitimela sokuvakasha Izikhangibavakashi